बैंक र वित्तिय संस्था कोरोनाको हटस्पट बन्दै, हजारौ हजार संक्रमित, एक सयको मृत्युः राष्ट्र बैंक बेखबर - Aathikbazarnews.com बैंक र वित्तिय संस्था कोरोनाको हटस्पट बन्दै, हजारौ हजार संक्रमित, एक सयको मृत्युः राष्ट्र बैंक बेखबर -
uw seattle mfa creative writing quote about creative writing words to help with essay writing literature review purdue online writing lab entry level content writer cover letter can you write vice versa in an essay write my college admissions essay how to get out of doing homework creative writing football match creative writing doctoral programs online check homework help year2creative writing lesson
नेपालमा अदृश्य शक्तिबाट आएको अदृश्य रोग कोरोना भाइरसको कारण बैंक र वित्तिय क्षेत्रका करिब हजारौ हजार कर्मचारी र एकाघर परिवार विरामी परेका छन् भने १०२ जनाले यो समाचार तयार पार्दासम्म मृत्युवरण गरेको खुलेको छ ।
बैंक र वित्तिय संस्था अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने भएका कारण बैंक र वित्तिय क्षेत्रका हजारौं हजार कर्मचारीहरुले जीवन जोखिममा राखी सेवा दिँदै आएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
देश पूर्णरुपमा लकडाउनमा छ उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय ठप्प छ , तर, पनि बैंक र वित्तिय संस्था खोल्नु पर्ने वाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय कोरोना कहर उच्च देखिएको भन्दै केही सीमित शाखा मात्रै खोल्न बैंक र वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन नै दिएको छ ।
भनिन्छ अब उप्रान्त उपत्यकामा मात्रै ६ वटा बैंकहरुका शाखा सञ्चालन गरि सेवा दिनु पर्नेछ । बैंक र वित्तिय संस्थाका सयौं कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमणबाट अकालमै मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । यो अत्यन्तै दुखदायी र पीडादायी समाचार हो भन्दा फरक पर्दैन ।
यति ठूलो मात्रामा बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारी र एकाघरका परिवार कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छन् । पीडा खपीसाध्य नै छैन । तरपनि बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले सेवा दिइरहेका छन् । आफ्नो दायित्वलाई ग्राहक माँझ पूरा गरेका छन् । तर, पीडा र चिन्ता बढेको छ बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारी र एकाघरका परिवारमा भन्दा फरक पर्दैन । गर्भनर साब ।
एक बैंकका उच्च कर्मचारीले राजतिलक साप्ताहिकसंग टेलिफोनमा पीडा पोख्दै भनेः– हामीले डर, त्रास र पीडा बीच सेवा दिएका छौं । हाम्रा सयौं कर्मचारी साथीहरुलाई कोरोनाले लगेको छ तरपनि कोरोना बीमा बाहेकका कुनै सुविधा भत्ता हामीलाई बैंक उच्च नेतृत्वले दिएको छैन । उपचार गर्दा समेत रकम आफैले जुटाएका छौं । उनीले नाम नलेख्ने शर्तमा थपे । उच्च व्यवस्थापन र नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कहर बीच जीवनलाई हत्केलामा राखी काम गर्नेहरुको बारेमा सोच्नु पर्दछ कि पर्दैन ?
भनिन्छ बैंक र वित्तिय संस्थाहरुमा ४६ हजार कर्मचारी र एकाघरका परिवाहरुमा कोरोना पोजेटिभ भएको छ । यस्तै विकास बैंकहरुमा ८ हजार ६ सय, फाइनान्स कम्पनीहरुमा २५ सय, लघुवित्त संस्थामा ७२ हजार भन्दा बढि कोरोना भाइरसबाट बिरामी भएको तथ्य नेपाल बैंकर्स संघलेनै बाहिर ल्याएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक निरिह कर्मचारीहरुको बारेमा तै चुप मै चुप झै सुनेको नसुनै गरि बस्तु उचित कति होला ? यो चाहि खोजीकै विषय बनेको छ । नेपालमा कोरोना कहर उच्च छ । सबैजस्तो व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । देशपूर्ण लकडाउनमै छ । यस्तो बेला बैंक खोल्नु पर्ने कारण चाहि के हो ? सानो तिनो पैसा झिक्न एटिएम छन् । औषधी उपचारको सामान ल्याउन एलसी खोल्न उच्च कर्मचारीको टेलिफोन र इमेलबाटै पनि गर्न सकिन्छ । तर, यति धेरै कर्मचारी विरामी हुँदा र सयौं कर्मचारीको मृत्यु हुँदा पनि किन राष्ट्र बैंक ठोस निर्णय लिन सक्दैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई सापटी लिने हो भने कोरोना भाइरसको हटस्पट बनेको बैंक र वित्तिय क्षेत्र तुरुन्तै बन्द गर्दा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या घट्ने र रोगथाममा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि राज्यलेनै यस बारेमा विचार गर्नु पर्दछ । कि पर्दैन ।
नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुमा १३ हजार ९ सय ८८ जना जसमध्ये १० हजार ८ जना कर्मचारी संक्रमित भएको भेटिएको छ । संक्रमितमध्ये १५ जना कर्मचारी र ५९ जना एकाघर परिवारको सदस्य गरी ७० जनाको मृत्यु भइसकेकोे दुखद खबर पनि बाहिर आएको छ । हेक्का होस् ।
संक्रमितमध्ये बैशाख १५ गतेयता नै ३ हजार ६ सय ४६ कर्मचारी र १ हजार ७ सय २३ एकाघर परिवार गरी कुल ५ हजार ३ सय ६९ जना संक्रमित भएका हुन् । जसमध्ये ९ जना कर्मचारी र ३१ जना एकाघर परिवार गरी ४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । भन्दा फरक पर्दैन । जीवनलाई मात्रै होइन एकाघरकै परिवारलाई समेत जोखिम पुगेको यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समयमै सोच्नु पर्दछ कि पर्दैन ।
आफ्नो नेपालका २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ग्लोवल आइएमइ बैंक लिमिटेडका कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएका छन् । बैंकमा हालसम्म ९ सय २९ कर्मचारी र ४ सय २२ एकाघर परिवार गरी १ हजार ३ सय ५१ जना कोरोना संक्रमित भइसकेको भेटिएको छ ।
सबैभन्दा थोरै कोरोना संक्रमित एनसीसी बैंकमा देखिएका छ । बैंकमा ७२ जना कर्मचारी र ७१ जना एकाघर परिवारका सदस्य गरी कुल १ सय ४३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको भेटिएको छ । यो दुवै संस्था हेर्दा बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा कोरोना कहर उच्च छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालका राष्ट्रियस्तर र क्षेत्रियस्तरका गरी १८ वटा विकास बैंकहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये १४ वटा विकास बैंकमा कर्मचारी र उनका परिवारका सदस्यलाई कोरोना संक्रमण उच्च भएको तथ्य फेला परेको छ ।
१८ वटा विकास बैंकमा १ हजार १ सय ६३ जना कर्मचारी र ३ सय ८५ जना एकघर परिवार गरी कुल १ हजार ५ सय ४८ जना संक्रमित भइसकेका छन् भने ३ जना कर्मचारी र ८ जना एकाघर परिवारका सदस्य गरी ११ जनाको मृत्यु समेत भइसेको दुखद समाचार बाहिर आएको छ । राज्यले अरु नसके पनि बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारी र एकाघरका परिवारलाई निःशुल्क कोरोना भ्याक्सिन दिनु पर्दछ कि पर्दैन ।
हाल विकास बैंकहरुमा कुल ८ हजार ६ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सञ्चालनमा रहेका विकास बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै मुक्तिनाथ विकास बैंकमा र सबैभन्दा थोरै मितेरी विकास बैंकमा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकमा हालसम्म ४ सय २३ जनालाई कोरोना संत्रज्ञmमण देखिएको छ । जसमध्ये ३ सय २२ जना कर्मचारी हुन् भने १ सय १ जना एकाघर परिवारका सदस्य हुन् ।
उता, मितेरी विकास बैंकमा २ जना कर्मचारी र २ जना एकाघर परिवारका सदस्य गरी हालसम्म ४ जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको भेटिएको छ ।
नेपालमा संचालित २० वटा फाइनान्स कम्पनीहरु रहेका छन् । ति मध्ये १९ वटा कम्पनीका ३ सय २१ कर्मचारी र २ सय १ जना एकाघर परिवार सदस्य गरी ५ सय २२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भइसकेको देखिन्छ । जसमध्ये ७ जना एकाघर परिवारको सदस्यको मृत्यु भइसेकेको समाचार छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरुमा हालसम्म २५ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनीका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यो कम्पनीमा ५२ जना कर्मचारी र ३६ जना एकाघरपरिवारका सदस्य गरी कुल ८८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
सबैभन्दा थोरै एनएसएमएल फाइनान्स कम्पनीमा कोरोना संक्रमित देखिएको छ । कम्पनीमा ३ जना कर्मचारी र १ जना एकाघर परिवार गरी ४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालमा रहेको ७२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । यी सस्थाहरुमा १५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । सञ्चालनमा रहेको लघुवित्त संस्थाहरुमध्ये हालसम्म ६४ वटा संस्थामा १ हजार ८ सय ७० जना कर्मचारी र ४ सय ३७ जना गरी २३ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । यी मध्ये १ जना कर्मचारी र ९ जना परिवारका सदस्य गरी १० जनाको मृत्यु भइसेको भेटिएको छ ।
कोरोना संक्रमण देखिएका संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै स्वालम्वल लघुवित्तमा १ सय ७९ जना कर्मचारी र १ जना परिवारका सदस्य गरी १ सय ८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भइसकेको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै खप्तड लघुवित्त संस्थामा १ जना कर्मचारीमा मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको देखिन्छ ।
यी माथिका तथ्यहरु वाटै प्रस्ट भएको छ कि बैंक र वित्तिय संस्थाको जागिरमा कत्ति जोखिम छ भनेर । त्यसकारण अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने बैंक र वित्तिय संस्थाको सेवालाई थप राहत दिनु पर्दछ कि पर्दैन । गर्भनर साब ?
यस्तो महामारी बीच सेवा दिने बैंक र वित्तिय संस्थाहरुबाटै सयौ अर्बपति र करोडपतिले छुटका नाममा लाखौं लाख लिने गरेका उदाहरण हामीसंग छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले तत्कालै बैंक र वित्तिय संंस्थाहरुलाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यसभित्र पनि बैंक कर्मचारी र एकाघरका परिवारलाई लक्षित कार्यक्रम आउनु जरुरी देखिन्छ । हेक्का होस् । राजतिलक साप्ताहिक वर्ष ८ अंक ४२ वाट साभार गरिएको
नबिल बैंकमा फेरि फर्किए उदयकृष्ण उपाध्याय